“ဟုတ်ပါတယ်ရှင်… “နှောင်ဖွဲ့မှုလွတ်ကင်းခြင်းကဗျာ” ကို ရေးစပ်သွားတဲ့ ကဗျာဆရာ “ဈာန်” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်… အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဈာန် ဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်ဟာ ရွာသားတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဈာန် ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ မှန်းကြည့်ကြပါဦးနော်… ဒါကို ဆုပေးပွဲနေ့မှပဲ အဖြေညှိကြတာပေါ့… အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်… “
ပြခန်း အမှတ် ၄ အထိ အောင်မြင်စွာ
ခမ်းနားစည်ကားစွာ ဖန်တီးပြသ နိုင်ခဲ့ပါပြီ ။
ကဗျာပြခန်း ၄ က ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။ သူကြီးကလည်း အမှာစကားပြောထားတယ်။
ပြခန်း တင်ဆက် ပြသ သွားပုံကလည်း
အစီစဉ်တကျ ကျစ်လျစ် လှပ အောင် ရေးသား ဖန်တီး သွားနိုင်တဲ့
ပြခန်း အဖွဲ့ ဝင် လုံမလေး မွန်မွန် ။
မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်လို့ချီးကျူး လိုက်ပါတယ် ဗျာ ။
ကဲ ကျွန်တော်တို့ ချစ်သော ကဗျာ များကို
ကဗျာ ချစ်သော ကျွန်တော်တို့အားလုံး အတူတကွ
ခံစား လိုက်ကြစို့ 
အလင်းဆက်ရဲ့ “နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်အက” ကို ရှုစားရင်း
ကဗျာများကို ခံစားလိုက်ဂျစို့ …
မချီးကျူးပါနဲ့အေ..အာ့ လက်ကုန်ပဲ.. ထပ်မရေးခိုင်းနဲ့..ရေးတတ်တော့ဝူး..
ဟီး..အလက်ဆင်းရဲ့ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်အက က အရမ်းကောင်းတယ်နော်..
အပေါ်ကနေ ဖတ်လာလိုက်တာ အဟုတ်ပဲ …
အောက်ဆုံးရောက်မှ “ဦးစိတ်တို” ဖြစ်သွားရတယ် ….
ဂလောက်ထိ လူကို ချစ်တာ …
ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ကွက်နဲ့ တင်ပြသွားပုံလေး ကောင်းပါရဲ့ဗျာ
ကဗျာတွေကိုတော့ မဗုတ်သေးဘူး …
သေချာ ဖတ်နေဒုန်း …
သဂျားရေ.. ဟောဒီမှာ သူ့ကိုယ်သူ ဦးစိတ်တိုတဲ့…
ဖတ်ပြီးကို ရီရတာ ပါးစပ်မစေ့ဘူးးး
ကဗျာတွေတော့ အေးဆေးဖတ်ပြီး နောက်မှ ပြန်လာမယ်နော်။
ဒါနဲ့ တစ်ရွာလုံးစာ ဆယ်လမွန်ငါး ကျွေးရမယ် ဆိုတော့ကာ……….
ခင်ညားလေးက ကျုပ်ကို ပါ့တိုင်း ဆင်းရအောင် လုပ်နေတလားဟမ်???
ဈာန် တို့တော့ ကိုယ်ထင်ပြရတော့မယ်။ ဘလက်မေးလုပ်လို့ မရတော့ဘူးးး
ဘိုပဲ ဖစ်ဖစ် ခု ကျွေးလိုက်ရပြီ.. စကားမစပ်..အပြင်မှာ တကယ်စားချင်လိုက်တာ.. :harr:
ဟီး..ဈာန်က ဘူလဲ မတိဝူးနော်.. စိတ်ဝင်စားစရာပဲ..
ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်ကို ပြောင်းပေးလို့ ရမလားးးဟင်
က လည်း က ချင်ဘူးးး
ကဂျာလည်း ရွတ် ရဲဘူးးး ။
နိုးပါကွီ..နင့် အကလေးက ဆွဲဆောင်မှုရှိတာဟ..အဟိ..
မမလှလှနဲ့ကြောင်ကြီး ဘာဆက်ဖြစ်တုံး ဆုံးအောင်ရေးလေ။ ဒီမှာ ထိုင်ရမလို ထရမလို..
ဟွန်. နာ ဂဗျာ လဲ ပါဘူး…………… အဟင့်အဟင့်………..
ကဗျာ ပေးတဲ့ အချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး ပြခန်းမှာ ကဗျာ ပြည့်သွားပြီ မပြည့်သေးဘူးနဲ့ လိုက်ပြီး ကဗျာတွေက ပါတာပါဗျ။
ပြခန်း ၄ မတိုင်ခင် ပေးတာဖြစ်ပေမဲ့လည်း အဲ့ဒီ အချိန် ပြခန်း ၄ က ပြည့်သွားရင် ပြခန်း ၅ မှ ပါနိုင်တော့မှာမျိုးပါ။
စိတ်ရှည် သည်းခံကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဗျာ၊။
အော်ဂလိုလား……….. အေးပေါ့အေ…. အနုပညာသမားဆိုတော့လဲ စိတ်ရှည်ရဒေါ့မှာပေါ့အေ……..ခွိခွိခွိ
(သီချင်းကောင်းကောင်း သီချင်းတောင်း အနောင်ဇာလေသံဖြင့်..)
ဟုတ်ကဲ့..လုံမတို့ ကဗျာပြခန်းကို ပေးပို့လာတဲ့ ကဗျာတွေဟာ များပြားလွန်းတဲ့အတွက် အားလုံးကို အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..ဒါကြောင့် မိမိတို့ရဲ့ ကဗျာ ဘယ်ပြခန်းမှာ ပါမလဲဆိုတာ အားလုံးပဲ စောင့်မျှော်ပေးကြပါလို့ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်..
အဟစ် အဟစ် … အလုပ်မအားတဲ့ကြားက ချစ်ကလေးမွန်မွန်ရဲ့ကဗျာပြခန်းအကိုအပြေးလအလွှားလာကြည့်ရဒါ
ကွန်ပလူတာကြီးကြည့်ရင်းပါးစပ်မစေ့နိုင်လို့ :mrgeen: GM တွေ့သွားမှာတောင်ကြောက်ရ
ပြခန်း ၄ က ကဗျာတွေကကောင်းချက်ပဲ (ကိုယ့်ကဗျာလည်းပါတာကိုး ဟိ)
ခုချက်ချင်းဗုတ်ပါဆို ဘာရွေးလို့ရွေးရမှန်းမသိလို့ အတော်အားမှ သေချာလာဖတ်အုံးမယ်ဂျာ
ဒါနဲ့ အူးစိတ်တိုဂျီးကော နေကောင်းဘီလား
ဟီး..ဒမှာလည်း အူးစိတ်တို နဲ့ မျောက်ညိုတဲ့..
သဂျားရေ..နီတော့ မျောက်ညို ဖစ်နေပီ..
လုံမလေး ကလဲ အရေးကောင်းတော့…
ဧည့်ခံကျွေးမွေးတဲ့ အစီစဉ်တွေကလဲ မနဲ…
အပြင်မှာ တကယ် ဖြစ်ချင်တယ်..
ဟယ်။ ကော်မန့်တွေပဲ များနေတာ။ တဗုဒ်မှ မဗုဒ်ကြသေးဘူးးး
ပလိုမိုးရှင်း ရှိပါတယ်။ လုံမလေး ကို မေးကြပါ။
မန့်ကြပါ..ဗုတ်ကြပါ..ပလိုမိုးချင်း ချိဘာဒယ်… ဘာလဲဆိုတာ ပီးမှ ပေါမယ်…
အဲ့ .. ခိုင်ရေ ပလုံမိုးရှင်းကိစ္စ .. သူကလေးလဲမသိရပါလား
ဘို ပလုံမိုးရှင်းတွေလဲဟင် ရွာထဲက ဂေါ်မစွံလူပျိုးရီးတွေကို မဲဖောက်ပေးမတဲ့လား :D
ရှိတမြ လူဗျိုဂျီးဒွေက ဇီဇာကြောင်ဒွေမို့ မဲဖောက်မယ် ဆိုမှ ဘယ်ဒူမ မလာဘဲနေမာ။
အီးးး..ကျုပ် ပြခန်းလေး လူမ၀င် ဖစ်ပါမယ်တော်.. ဒီ လူဗျိုဂျီးတွေနဲ့တော့ မပရိုမိုးချင်း ပါရစေနဲ့..
အပျိုကြိ်းတွေ…နဲ့ပရိုမိုးချင်းလိုက်ပါလား..ဟင်…
ကဗျာပြခန်းက တစ်ခေါက်တစ်မျိုး မရိုးရအောင်ပဲ …
အဲလို ရေးတတ်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေ အရမ်းအားကျတာပဲ …
နောက်မှ သေချာဖတ်ပြီး လာဗုတ်တော့မယ် ……
အမြန်ဖတ်ပါ .. အမြန်လာဗုတ်ပါ
အထူးအထူး ပရိုမိုးရှင်းက ဘာလဲဟင် …
အဲဒါသိရမှ ဗုတ်တော့မယ် … ဟိဟိ
စပ်စလူးနတ်ပူးတဲ့ ကန္နားစီးတယောက် မဲဖောက်ပေးမယ်ဆိုလားးး
အန်င်္တီင်္ပေါက် ( မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက် ) တို့ ဆို..ဟုတ်သေး….
သူတို့ က… ဘာပြု ပြီးသားတွေ ဆိုလားးးးး
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကန္နားစီးပဲ ကြိုက်ထာ ……
လူငယ်တွေကတော့ ခြေသွက်လှကြည်လားလို့ ပြောရမလားဘဲ
တစ်ခါနဲ့တစ်ခါ မရိုးနိုင်စရာတွေနဲ့ ဆင်ယင်ကာ တင်နေကြတာမို့လေ။
ဗုတ်တာတော့ တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးဗုတ်မယ် ကဗျာတွေအရင် ဖတ်လိုက်အုံးမယ်ဗျို့။
စောင့်နေပါမယ်…တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့… (ခင်ဘုဏ်းသီချင်းသံဖြင့်.. )
ထားတော့..မျက်လုံးထဲမှာပိုမြင်လာစေတယ်…….ဆက်လက်ပြီးကဗျာပြခန်း (၅)ပါ..ဖွင့်ပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ်.
ပြခန်း (၅) ကို ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက် ၀န်းကျင်မှာ ဖွင့်လှစ်ပါမယ်…
ကြိုက်တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ဗုတ်သွားပေးဦးနော်..
ဗုတ်မှာက ကဗျာ ၁၃ ပုဒ်၊ ကဗျာပြခန်းမှာက ၁၆ ပုဒ် ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီအပုဒ်တွေမပါဘူးဆိုတော့ အဲဒီအပုဒ်တွေက ဗုတ်ရန်မလိုလို့ ချန်ထားတာလားဗျ။
၁။ ကဗျာစစ်မျက်နှာ က ထုတ်ဝေပြီး ကဗျာဆရာရဲ့ ကဗျာကို ပြန်ဖော်ပြထားတာ မို့လို့ပါ.
၂။ နဲ့ ၃။ က ရွာသားမဟုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ ကဗျာမို့လို့ပါ…
ပုံနှိပ်ပြီးသားကဗျာ မပါရဘူးဆိုရင် တို့ကဗျာကိုလည်း ဗုတ်စာရင်းထဲက ဖြုတ်လိုက်ပါ…….။ ဘာလို့လဲဆို အလင်းဆက် ကဗျာတောင်းကတည်းက ရွာထဲမှာမတင်ဘူးသေးတဲ့ကဗျာကို တစ်မင်ရွေးပေးလိုက်တာ အဲဒိကဗျာက ဆရာထက်ဝေး ကောင်းမှုနဲ့ 17-2-2013 နေ့ထုတ် ဖန်စီ ဂျာနယ်မှာ ပါပြီးသားကဗျာ ဖြစ်နေတယ် ………….။ တော်ကြာ စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်းရောင်းဝယ်တဲ့နေရာ နေ၀န်းနီက ကြားထဲက ကန့်လန့် ကန့်လန့်ဖြစ်နေမယ် ……………။
အာ့က ဒီလို အကိုခရေ
ကဗျာစစ်မျက်နှာဆိုတာက အမွန့်ရဲ့ပို့စ်အတွက် ကိုးကားကဗျာလေးပါ
မရေရာခြင်းနဲ့ ဘာလဲဆိုတဲ့ကဗျာနှစ်ပုဒ်ကတော့ ရေးသူက ရွာသူရွာသားထဲကမဟုတ်လို့ ဗုတ်နဲ့မဲပေးတဲ့စနစ်မှာ မပါဝင်တာပါရှင့်
ရွာသားတွေရေးတဲပ ၁၃ ပုဒ်ထဲကပဲ ရွေးချယ်ပီး ဗုတ်ပေးပါအုံးနော့်
တစ်​ခုခု​တော့မှား​နေပြီထင်​တယ်​ နည်းပညာဆရာတို့​ရေ
ထင်​တာက​တော့ sdma800 လိုင်း​ကြောင့်​ထင်​တာပဲ
ဗုတ်​မရတာ သုံးကြိမ်​ရှိပြီဖြစ်​ပါ​ကြောင်း ….
မလာရင် သားလေးကို တကယ်ယူပလိုက်မယ်…
ရင်ခုန်ရိုက်ထှာ.. ငွဲငွဲ. ..
ချို့ ဗျာ တွေများ ဖတ်ရတာ ကြက်သီးထ ဂျာကြီး… ကောင်းချက်.. လန်ထွက်နေတာပဲ
ငါ့သယ်ရင်းလေး တော်လိုက်တာ.. ငါ့လိုပဲ..ဟဲဟဲ
ဖစ်ရလေ…. ဒီမယ်…ဒီမယ်..ဖတ်ပြီးရင်တော့ ဗုတ်သွားဦးနော်.. ဒါဗျဲ
ဘေးကနေ အသာ ကြည့်နေမို့ ပဲ ။
မနေနိုင်တော့လို့ ဝင်ပြော ရဦးမယ်။
ကျွန်တော်က လူပျိုကြီး စာရင်း မဝင်သေးဘူးနော် ။
အခုမှ 16 နှစ် ကို9နှစ် သာသာ လေး စွန်း သေးတာ ။
ဟမ် … ဘာာာာာာာ
၁၆နှစ်ကို ၉ နှစ်စွန်းတယ်
ဒါဆို အိုဗာ တွမ်တီးဖိုက်
အိုချေပြီ အာဟိ ခွိ
ဒညင်းဝက်တော့ သွားရှာဘီ. ကွိကွိ.
ကျော်. က သူ တ တ နေတဲ့ထွီဇာလေးဖက်တောင်
တနှစ် ဂျူနယာ ကျသူပါထီညာ.
ကျွန်တော် ထွီစရာကို မချစ်တော့ဘူးး
လမ်းထိပ်မှာ အကြော်စုံရောင်းတဲ့ 
ဒေါ်ဖွားမေ ကိုပဲ ချစ်တော့မယ်
ဘသူပြောပြော ဂု မစိုက်ဘူးး
နာ့ပြခန်းမှာ ကြော်ငြာဝင်ခွင့်မချိ… နာပဲ ၀င်မယ်.အဟိ… (ကာရန်နဲ့ရေးထားတာနော်..)
ကဗျာချစ်သူတွေရဲ့ စုစည်းမှု ညီညွတ်မှု အားကြိုးမာန်တက်ရှိမှုတွေက ချီးကျူးစရာပဲ။
လုံမလေးရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ကဗျာပြခန်းဖွင့်ပွဲကို ရောက်သွားရသလိုပဲ။
နောင်ရွာသူားတွေရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေ ဆုပေးပွဲတွေလုပ်မယ်ဖို့အတွက်……
ဦးဆောင်သူနဲ့ အလှူရှင်ခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကဗျာချစ်သူများကို ဦးဆောင်သူအဖြစ် အဆိုတင်သွင်းပါတယ်။
ဦးဆောင်သူ ဒဲ့ 
ကိုယ်တွေက ကွကိုယ်တောင် ဖိုးသိုးဖတ်သတ်နဲ့ ခုလိုလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားရတာနော့် အလက်ဆင်းရေ …
အင်း မပြောတော့ဘူးနော်…..အန်တီမမ ခင်ဗျ….
ဥက္ကဋ္ဌကြီးပဒုမ္မာရဲ့ အဟံပထမံကို ဖတ်ပြီး တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူတတ်မှုဆိုတာတွေကို သဘောကျခဲ့တယ်။
တကယ့်တကယ်ကျတော့ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူတတ်မှုစတဲ့ နေရာတွေမှာ အဟံပထမံ ရမယ့်အစား တာဝန်လွှဲမှု၊ ခေါင်းပြောင်းမှုတွေမှာသာ အဟံပထမံ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
နောက်ပြီး အစုအဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အများသဘောမခံယူပဲ မတိုင်ပင် မညှိနှိုင်းပဲ ကိုယ်ပြောချင်ရာ အလွယ်ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ဝင်တွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။
အခုလောလောဆယ် တွေ့ဆုံပွဲအတွက် အားတက်သရောဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရွှေတိုက်စိုးကိုလည်း အားနာမိပါတယ်။ တောင်းလည်းတောင်းပန်ပါတယ်။
လုံမလေးရဲ့ပို့စ်မှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေ ရေးမိပြောမိတဲ့အတွက် ပိုစ့်ပိုင်ရှင်လုံမလေးကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ အန်တီရေ… အကြိုက်ဆုံးကဗျာကို ဗုတ်ပေးပါဦးနော်..
ဟဲ..ဦးဆောင်သူကတော့… အနော်တို့တွေက စာထဲမှာပဲ ရေးတတ်တာ..ပြင်မှာ လုပ်တတ်ဝူးရယ်….
ပြခန်းလာရတာ ကျန်တာတော့အဆင်ပြေပါတယ်… ၀င်ကြေးက နည်းနည်းဈေးများသလိုပဲ….
အရင်လတွေလတွေက ဒီပြခန်းကို သိပ်ပြီး သတိမထားခဲ့မိဘူးဗျ……
ကျုပ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း မျက်နှာနာတဲ့ တစ်ယောက်ကိုပဲ ဗုတ်ထားခဲ့ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးး
မျက်နှာနာတဲ့တစ်ယောက်ဆိုတော့.ဘူက ဘာကဗျာရေးတာ သိလို့လား…
ဘာပဲဖစ်ဖစ်..ဗုတ်သွားတာ ကျေးကျေးပါ ကိုရင်..ကိုရင့်ရဲ့ သာလှအကလေးလည်း ကြည့်လို့ကောင်းသား..
အထူးအထူး ပရိုမိုးရှင်းနော် ….. (မမေ့ရ) …
ဒါလောက် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဖွင့်သွားတော့
နောက်ပြခန်းကို ဘယ်လို အရေးအသားနဲ့ ဖွင့်ရမတုန်း လို့
ပြခန်းက အဖွဲ့သားတွေကိုကျ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ခိုင်းပြီး
သူကျတော့ ရွာသူချော တဲ့
နောက်ပြီး မန့်တဲ့သူတွေ ဗုတ်သွားကြပါဗျို့
ကျွန်တော်လည်းး အက်ဒါလေး ပြောမလို့ဘဲ
နောက်ပြခန်း ကျရင် ဘယ်လို ပုံစံက ဒီလောက် မြိုင်နိုင်မှာလဲ ကွယ်
နီပဲ နာ့ကို အတင်းရေးခိုင်းပီးတော့….
နာလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ ရေးပလိုက်တာ… ထပ်မရေးတတ်တော့ဝူး…ဒွတ်ခပဲ…
ဟီး..ဒါဂတော့ ဒလို ချိဘာဒယ်…ဂယ်တော့..အမှန်တရားလေးဒွေ ရေးထားဒါဘဲကွယ်…လက်ခံလိုက်ပါနော်..
နီက အရေးကောင်း..အတွေးကောင်း..လေ ။
ပြခန်း ပိုစ့်တွေကို…နီ…ဒိုင်ခံ တင်ပေးမလားဟင်..
နာတို့ …ကို တနားတောအားဖင့်……
ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် အလက်ဆင်းပြောတာမှန်ပါတယ်ချင့်
လုံမလေးက ဒိုင်ခံ ပို့(စ) တင်ပေးပါ။
ကျုပ် ကဗျာတွေကို ဓားမြတိုက် (အဲလေ) တောင်းပေးပါ့မယ်။
ကဲ….တာဝန်တွေ ပြန်ခွဲဝေပါပြီ ။
လူလည်မလေးမွန်မွန် အဲ..လုံမလေးမွန်မွန်က… ပြခန်းပိုစ့်တွေ ဒိုင်ခံတင်သူ
သားသားက.. ချစ်သုဝေ ကိုနှမြောလို့ ..
၀တ်မှုန်ရွှေရည်ကို ဖတ်ပြီး.ငိ်ုချင်နေလို့ ……
အဲ့ကိတ်စနတွေ အပင်မျာ ချင်းမယ်… ထွက်ခဲ့ဂျဘာ..
ကဗျာပြခန်း ၄ ဖွင့်ပြီဆိုလို့ အလုပ်ထဲက အပြေးလာခဲ့ရတာ
အစားအသောက် ပွဲတွေလည်း မမှီ…. ပွဲခင်းထဲလည်းကြိတ်ကြိတ်တိုး လူတွေလည်းမနဲကိုဗျ
ဦးရွေရိုး ဒေါ်မိုးအကတောင် မှီရုံပဲ ရှိတယ်……….
ဒါပေမဲ့ ပြခန်းထဲမှာ… ကိုယ့်ကဗျာလေးကိုသပ်သပ်ခပ်ခပ် လေးတွေ့လိုက်ရတော့ ….အိုး ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း
ပြခန်းဖြစ် မြောက်ရေးကော်မတီ ကိုလည်း အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ
အယ်…မမီဝူးလား…နေဦး..အနော်ဖွက်ထားတဲ့ မုန့်တွေ ယူပေးမယ်…
အားပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် ဦးကြိမ်… စောင့်ရတာ ကြာသွားတယ်ဆိုရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်နော်…. နောက်ပြခန်းတွေအတွက်လည်း ကဗျာလေးတွေ ထပ်ပို့ပေးပါဦးနော်…
အပြေးအလွှားလေး.လာတယ် ဆိုတာ သိရတာကိုက..
ကျွန်တော်တို့ ပြခန်းလေးကို… ဘယ်လောက် စိတ်ဝင်စားကြောင်း..ပြသလိုက်သလိုမို့ ..
ကဗျာလေးတွေ လည်း..ဆက်ပို့ ပေးနေပါဦးနော့် ။
ပြခန်းတွေ..တစ်ခန်းပြီး တစ်ခန်း.. ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ .. အဆက်မပြတ် ဖွင့်ပြနိုင်ဖို့ ..
လူငယ်တွေ ကြိုးစားနေပါတယ် ။
အားလုံးက လည်းကြိုဆိုကြတော့.. အားလည်း တက်ပါတယ် ။
(အပြင်မှာပါ.. ပြခန်းတစ်ခု ဖွင့်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်…။ ကူကြပါလား…။ )
နီ လုပ်ပြန်ပီ..အလက်ဆင်း.. :D
ဟယ်…. ပြခန်းကြိုဆိုရေးတာဝန်မှုး နာက အိပ်ပျော်နေတာ အထုမှနိုးတယ်…. လာနော်…လာနော်.. သကြားလုံးတွေ ဂျယ်လီတွေ ချိုချဉ်တွေ များများဗုတ်ရင် များများရမယ်..နည်းနည်း ဗုတ်ရင် နည်းနည်းရမယ်.. အပျိုဂျီးဒွေအတွက် ဦးလေးတွေလည်း ချိတယ်နော်.. လူပျိုဂျီးဒွေ အတွက် နွားမ…အဲ အမတွေလည်းချိဒယ်နော်…များများဗုတ်တဲ့သူကို လုံမလေးက အာဘွား တဲ့….
ဘွားဒယ်..ဘွားဒယ်.. စာထဲမှာ ပြောပါတယ်.. အဟိ..
လုံမလေး အသံလေးက ချစ်စရာလေးပါလား..။
ကဗျာလေးတွေက ရွေးရခက်ကြီးဖြစ်နေတော့ စိမ်ပြေနပြေဖတ်ပြီးမှပဲ ဗုတ်တော့မယ်..။
ပြီးရင်လည်း ပြန်လာဗုတ်ပေး.. ဒါဗျဲ..
အခုရက်ပိုင်း ကျွန်တော့် ဖေ့ဘွတ်က ပင်လယ်ပြာပြာကဗျာချစ်သူ Group ရဲ့ ဒီလမှာလှူမဲ့ Donation ကိစ္စတွေ ကဗျာစာအုပ်ကိစ္စတွေ အလှူငွေ ကိစ္စတွေ စီစဉ်နေရလို့ ရွာထဲမ၀င်ဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ။
ကဗျာပြခန်းလေး စီစဉ်ပေးသူများနှင့် ဒီဇိုင်းလုပ်သူများအား ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကဗျာပြခန်းလေး ဖွင့်လာတာ အခုဆိုရင် ပြခန်းအမှတ်လေး တောင်ရောက်ပြီပေါ့ ( စောင့်ရတာလည်းကြာပီ )
ပြခန်းအမှတ် ၄ မှသည် နောက်သိန်းပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းရင် မန်းဂေဇတ်ရေ မင်္ဂလာပါဗျို့ ………..
မင်္ဂလာပါ ကိုလူစိုးရေ… ကဗျာပို့ပေးတာရော၊ မအားတဲ့ကြားက ပြခန်းကို လာပေးတာရော ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောပါရစေ… နောက်ပြခန်းတွေအတွက်လည်း ကဗျာပို့ပေးမယ် မို့လားဟင်င်..
အပလန်စား ဖွင့်ပွဲ ပါလား လုံမရေ့။
ကဘာ တွေ တော့ မဖတ်ရသေးလို့ မဝုတ် ရသေးဘူး။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မှာ အသေအချာဖတ်ပြီး ဝုတ်မယ်။
ပြီး ရင် ခိုးချပြီး ကိုယ်လဲ ကဘာ စပ်ကြည့်ဦးမယ်။
“နှောင်ဖွဲ့မှုလွတ်ကင်းခြင်းကဗျာ” က ….
ကဗျာ မသိ သူ၊ မခံစားတတ်သူ ကိုတောင် မှတ်မှတ်ရရ စွဲကျန် စေခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။
“ဈာန် ” ဆိုတာ ဒီ ကဗျာ မဖွဲ့တတ်တဲ့ “အရီး” လို့ ထင်သူများ ရှိကြလား မသိ။
ဂယ်တော့ ချစ်တဲ့အရီးရဲ့ ကဘာကို လိုချင်တာ… တစ်ပုဒ်လောက် မပေးချင်ဝူးလားဟင်င်…
ကဗျာဖတ်ပြီး သွားရည်ကျ ခဲ့တဲ့ “ရသမြောက် လင်္ကာ” ရှင် က မောင်ဂီ ကိုး။
ကိုယ် ခံစားလို့ ရတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို ဗုတ်သွားပါတယ်နော်…
အခုလို လာပြီးခံစားသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပါ မွန်ခစ်ရေ .. ခစ်လား ကစ်လားတော့မသိ
မွန်ခစ်ဆို ပိုပြီးချစ်ချာလေးနေမယ်တွေးမိလို့ အဲ့ဂလိုခေါ်လိုက်တယ်ကွယ် :D
မမွန် နဲ့ ကိုလင်းဆက်ရေ….
ပြခန်းအမှတ် ၅ ကျရင်ဖိတ်စာ တော့ဆက်ဆက်ပို့ပေးဗျာ…ကျနော့အသိဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်..ညအိပ်တက်လာခဲ့မယ်
ဦးအံစာတုံး ဦးကြောင်ကြီး အန်တီပဒုမ္မာ ဦးမာဃ ဦးခင်ခ ဆြာအုပ် အရီးခင်လတ်
ဦးဘလက် ရွှေတိုက်စိုး အန်တီမမ နေ၀န်းနီ ကိုပေါက် ကိုအာဂ မအိတုံ မခိုင်ခိုင် ကေဇက် နဲ့ ဆရာကြီးမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုတို့ကို
အရှင်လတ်လတ် အပြင်မှာ မြင်ဖူး တွေ့ဖူးချင်လို့ပါ…….တခြားရွာသူရွာသားတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအုံး…..
အခန့်သင့်ရင် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲတွေ ကြုံချင်ကြုံမှာ…တခါ တခါလာဖို့ကမလွယ်ဘူးမို့လား….။ခင်တဲ့ ဦးကြိမ်…။
ချစ်သော ဦးကြိမ် ရေ
ဆုပေးပွဲ ကို အရောက် လာမယ် မဟုတ်လားဗျ
ကျွန်တော်လည်း ဦးကြိမ် နဲ့ဆုံချင်ပါသေးတယ် ။
ပြခန်း အမှတ် ၅ ကို
ဇူလိုင် ၁၅ ၁၆ လောက် ဖွင့်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
သာမီးနဲ့ကော တွေ့ချင်ပုလားဟင်……….. လို့
ဦး လည်း သာမီးလေးကို တွေ့ဂျင်ဒါပေါ့ကွယ်
ဇူလိုင် ၂၁ ရက်ပါရှင့်။
ဒို့ကွန်ဖရဲင့်စ်ကျရင် မွန်မွန်ခိုင်းထားတဲ့ အတိုင်း တကယ်ကကြမှာလားဟေ့။
အယ် ဖလား ဖလား အဲလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ရယ်
တကယ်ဆိုရင် အဂျစ်ပဲလိုဒယ်လောက်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒေါ့ မဆိုးပါဝူးးးးးးးး :D
သားက လူရှေ့ ရောက် ရင် က ပြ ဖို့ မပြောနဲ့
စကားတောင် လေးလုံးကွဲအောင် မပြောရဲသေး
စကားပဲမပြောရဲတာလေ … အာ့ကြောင့် အမွန်ကစကားမပြောခိုင်းဘူး
ကပဲကခိုင်းတာလေ .. လုပ်ပါနော် .. မာမီရှိန်းထဲက နေတိုးလိုလေ
အကကျင့်ချင်ရင်လဲပြောနော့် .. မာမီရှိန်းကို အိမ်မှာခွေကူးထားဒယ် :D
ကဗျာပြခန်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ကဗျာရှင်များကလဲ ကဗျာရွတ်ဦးမယ်……..တဲ့
အကုန်လုံး နာပေါထားတဲ့အတိုင်းပဲ…. နာဂတော့ စီစဉ်သူပေါ့ကွယ်..တဂျား ရန်ကုန်လာရင် အကတိုက်မယ်..
သများ ဗုတ်သွားပါတယ်ချင့်………သုံးပုဒ်နော် …
ကဘာလေး တစ်ပုဒ်လောက် ပေးဘာလားဟင်င်…
၀င်ရောက်မွှေနောက် ဖတ်ရှုပြီးသကာလ ဗုဒ်သွားပါတယ် အမွန်ရေ ..။
ပြခန်းကတယ်စည်ကားသကိုးးးးး စားစရာတွေလည်းစုံပါ ကဲ ပြန်လိုက်ဦးမယ် လုံမရေ
ဘယ်ပြန်ဒါဒုန်း..ကြိုဆိုဧည့်ခံရေးပါဆို..မမဂျီးနော်… ကော်ဖီဝေခိုင်းရမလား.. ဟွန်း..
ဖိတ်ကြားခံရတာနဲ့ပဲ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာရှိလှပါပြီ …………။
နန်းတော်ရာသူရေ မပေါ်လာအတော်ကြာလို့ ထင်မိပါတယ်။
အခုလို အသံလေး အဲ စာအရေးလေး ပြန်တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။
မလာနိုင်တာ လိုင်းကြောင့်နဲ့မအားလို့ပါ ဦခင်ခရေ
အခုတော့ဖုန်းနဲ့မရရအောင် သုံးနေလို့လေ ဖုန်းနဲ့က လက်ဝင်တယ်လေ အဆင်မပြေဘူး
ကျန်တဲ့ ကဗျာပြခန်းတွေကိုကျ ပေါ်မလာဘူး
ယောက်ခမက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ… တုံလေးနဲ့ဘုံလေးကို စောင့်ရှောက်နေရလို့ ယောက်ခမကို ပြခန်းမှာ တာဝန်မပေးတော့တာ.. တိရား..
ပြခန်းဖွင့်ပုံ လွှတ် ကောင်းဗျာ ၊
တော် တာနော် ၊
ဗုတ်ပြီး ပေါ့ လုံမလေးရေ
(အရီး ဆီက တသွေမသိမ်း ကော်ပီ ယူထားဘာအိ။ ကိုင်း ရီပလိုင်း အာဘွားပေးဒေါ့)
၁၂ လောက် ပိတ်မလားမသိဘူး ဦးဆာ။
နောက်ပို့(စ) က ၁၅ လောက် တင်ရမှာဆိုတော့။
ကဗျာ ချစ်သူ အပေါင်းတို့ 
ဒီပြခန်း ဟာ ဖြင့်
ဗုတ် ပိတ် လိုက်ပါပြီ ခင်ဗျားးးးး
ဘယ်သူ ရဲ့ ဘယ်ကဗျာလေး က
အမှတ်အများဆုံး ကဗျာ ချစ်သူတို့ ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်သွားလဲဆိုတာ